Kedu ka ndị ahịa si dị ka ị na-ahọta ndị na-eweta ahịa akpaaka ahịa? | Martech Zone
Sọnde, Septemba 28, 2014 Douglas Karr
Anyị edeela banyere nghọta rụrụ arụ gbara gburugburu ihe akpaaka ahia bu, ma kesaa ụfọdụ n'ime Ihe ịma aka B2B na akpaaka ahịa ụlọ ọrụ. Nke a ozi sitere na Marketo, onye jikọtara ya na Ndụmọdụ Sọftụwia, kesara ihe omuma a na ebe ha jikọtara nsonaazụ nke otu narị otu ụlọ ọrụ iji chọpụta ihe na-eme ka ụlọ ọrụ ịzụta usoro akpaaka ahịa.
You maara na 91% nke ndị na-azụ ahịa na-enyocha akpaaka ahịa na nke mbụ ya? Nke a ejughị anyị anya, ebe anyị maara na akpaaka azụmaahịa na-agbasawanye kwa afọ-ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aghọta na iji nọgide na-asọmpi, akpaaka ahịa dị mkpa. Isi nchọta ọzọ bụ na isi ihe kpatara ụlọ ọrụ ji enyocha sọftụwia akụrụngwa ahịa bụ iji melite njikwa ụzọ na usoro akpaaka. Dayna Rothman, Marketo
Ihe omuma ahu na-aza 3 ajuju ndi mmadu why onye, ​​gini mere na ihe banyere ahia akpaaka:
Nye na-achọ ahịa akpaaka software?
Kedu ihe kpatara ụlọ ọrụ ji achọ sọftụwia akụrụngwa ahịa?
Gịnị bụ ihe ndị kasị arịọ ikike na ahịa akpaaka software?
Anyị naanị ndụmọdụ mgbe ahọpụta a ahịa akpaaka na-eweta bụ nke a… adịghị pụọ ma jụọ Gịnị bụ ihe kasị mma Marketing akpaaka Ngwọta?. Ndị na-ere ahịa akpaaka na-adị iche na atụmatụ ha, uru ha na usoro ha na-akwado. Ndụmọdụ anyị nye ụlọ ọrụ bụ ibido ụzọ azụmahịa gị maka nnweta, njigide na iwepụ ohere wee depụta usoro ndị ahụ na ngwanrọ akpaaka ahịa. Họrọ ngwanrọ kachasị mma na-akwado usoro gị. Ma ghara imebi akụ na a ngwọta, ị na-aga dị mkpa a ọtụtụ ihe onwunwe iji mejuputa azịza akpaaka ahịa karịa naanị ịdenye aha na ọrụ ahụ!
Tags: akpaghị aka Filiksndu nduatụmatụ akpaaka ahịaahia akpaaka ọrụntinye akpaaka ahiangwa ahia eji eme iheahia akpaaka na ọnọdụahịandụmọdụ ngwanrọ